Waini Inobatanidza iyo Catenas neRothschilds: Pinda Nyowani CARO
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Waini Inobatanidza iyo Catenas neRothschilds: Pinda Nyowani CARO
Argentina Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Waini & Midzimu
LR - Dr. Nicolás Catena naBaron Eric de Rothschild
Inzwa wakasununguka kundidaidza waini snob! Pandinoona kuti waini inogadzirwa nehukama pakati peDomaine's Barons de Rothschilds (Lafite) neimba yemhuri yeArgentina Catena - ndinodedera COVID yangu yakakonzera hutsi hwehuropi uye ndozviona, sezvo mhuri dzese dzave mukutengesa waini kubvira 1800s.
VaRothschilds vanga vachiwedzera zvido muminda yemizambiringa mhiri kweFrance kwemakumi emakore.
Hukama neveCatalas neMalbec yavo hwakatanga muna 1999, makore angangoita gumi nerimwe (11), apo maRothschild vakawana Vina Los Vascos kuChile.
Muna 2008, vachishanda pamwe neChinese CITIC, vaRothschilds vakatanga munda wemizambiringa muPenglai, China, iri chinhambwe kubva kuPenglai pakati penzvimbo yakachengetedzwa 377-mahekita.
Chinozivikanwa uye chinozivikanwa nezvehukama nebhizinesi reCatena ndechekuti Jancis Robinson anotenda Nicolas Catena Zapata, "… nekuisa waini yeArgentina pamepu yenyika." Larry Stone weJames Beard Foundation akatsunga kuti Nicolas Catena Zapata ari mumutambo mumwechete naRobert Mondavi mukugadzira nzvimbo yeNapa yewaini, "achikurudzira dunhu rese kuti riratidze mhando yepamusoro…"
Chiratidzo "Caro" musanganiswa wemazita emhuri mbiri - Catena naRothschild uye kuiswa kweRothschild hunyanzvi, mari, kushambadzira uye kumwe kudyara kwakagonesa waini yeCatena kuenda kune imwe nhanho uye kuti sangano riite waini kubva kuArgentina"(Laura Catena).
Ndichitarisa Kudzoka. Kuenda Mberi
Argentina inotengesa chete chikamu chechina chewaini yayo pasi rese. Nyika iyi inogadzira waini yeLatin America uye yechishanu pakukura pasirese. Iyo nzvimbo inokura waini, mumipata yeAndean Mountain, inowanzo fananidzwa neCalifornia yeNapa Valley. Mapurovhinzi eMendoza neSan Juan, nzvimbo iri pakati pewaini, vanozivikanwa pasi rese neMalbec, pamwe neBonarda, Syrah neCabernet Sauvignon. Zvinonakidza kucherechedza kuti Malbec yaimbova waini yakakosha muBordeaux kudzamara hosha nezvipukanana zvakatungamira kudzikira kwemuzambiringa. Mhando yeBordelaise yakaunzwa kuArgentina nemaFrench pakati pemakore ekuma1800 uko kwave kunofara. Hapana kana imwe yenyaya dzakatambudza French Malbec iripo mumakomo eAndes sezvo minda yemizambiringa yeArgentina yakasimwa pamusoro pemutsara mbuguru hadzikwanisi kutambanuka uye nzvimbo dzakakwirira dzemakomo dzinopa mwenje mukuru wezuva usina kumiswa, une simba.
Indasitiri yewaini yeArgentina yakagamuchira kurapwa kwakakosha kubva kuhurumende yenyika ichiisimbisa kubva pamhirizhonga yezvehupfumi iri munyika. Hurumende yakatemera kuti mabhaisikopo anofanirwa kubvumidzwa kushanda sezvo kugadzira waini iri "chiitiko chakakosha" ichibvumidza mazhinji einogadzira kuti ishande isina kumisikidzwa mudenda iri.
Kuvharirwa kwakawedzera kunwa waini munyika kunoratidza kukura kwe7 muzana pamusoro pa2019 apo kutengesa kwewaini kwaisvika angangoita 8.83 mamirioni hectolita, nepo mamirioni e8.4 mahekita akanyorwa muna2018. Kubva munaNdira kusvika Nyamavhuvhu wa2020 kutengesa kwewaini kwakasvika 6.21 miriyoni mahekita. Pamusoro pemunhu pamunhu, mu2019, pamunhu kunwa waini muArgentina kwaisvika 19.5 litita pamunhu, kubva pa18.0 litres pamunhu akanyorwa gore rapfuura. Izvi zvechokwadi zvakagadzira vagadziri vanofara seArgentina inotengesa chete chikamu chechina chewaini yayo kunze kwenyika. Kunwa waini kunze kwenyika kwakakura nezvikamu makumi maviri nesere kubva muna Ndira kusvika Mbudzi zvichienzaniswa nekuderera kwepasi rose kweanosvika matanhatu muzana (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Mhuri yekwaCatena yakatora kukosha kwakazara kwekuregererwa uku (semugadziri wezvokudya) uye pakutanga chaiko kweCovid (Kurume 20, 2020) vashandi vakapfeka masiki nemagirovhusi ndokunanga muminda yemizambiringa kunotora mazambiringa akasara ehwahwo hunoshamisa.
Izvo zvave nhamo kune mamwe matunhu eArgentina chave chiitiko chakanakira Caro musi waApril 1, Drinks International, yakazivisa kuti Catena Zapata akavhoterwa Nyika Inonyanya Kudiwa Waini Brand (2020) neboka repasi rese revatengi vezvinwiwa uye nyanzvi dzewaini. , kusanganisira vanyanzvi vewaini vanobva kunyika makumi mana nemasere.
Simuka Pedyo uye Pachako
Kubva kutanga kwezana ramakumi maviri (20) chivakwa cheCatena chave kuzivikanwa nekutora Malbec kubvisa-kutsigira hupenyu nekuziva kukosha kwenzvimbo dzakakwirira dzakakwirira munzvimbo dzemakomo eAndean eMendoza, Argentina.
Nicolas Catena, wechitatu-chizvarwa wemhuri anogadzira winemaker, ndiye aive wekutanga muArgentina kuburitsa bhotoro repasi rose reMalbec rine zita reCatena. Nhasi iye nemwanasikana wake Dr. Laura Catena vanoenderera mberi nekuwedzera kusvika kweiyo yavo Caro waini. Mutungamiriri we winemaker, Alejandro Vigil akabatana naCatena Zapata muna 2002
Iwo Andrianna Minda yemizambiringa ingangoita zviuru zvishanu pakukwirira uye inozivikanwa seGreat Cru yeSouth America.
Kukwidziridzwa kwepamusoro kunokurudzira mazambiringa eMalbec kuti awedzere acidity uye nekudaro iwo ari kutsva mukuravira. Matehwe makobvu anogadzira mazambiringa akaomeswa uye anonaka, achiburitsa waini inonaka. Sezvo Malbec yakazara-izere, ine hupenyu uye izere nemichero, chimiro uye chakanatswa chimiro cheCabernet Sauvignon inorumbidza uye inowedzera iyo yekupedzisira waini.
Musiyano mumwechete unoburitswa naCaro ndiAruma nemamwe mawaini misanganiswa yemazambiringa maviri, Malbec (kurongedza simba, ushingi nemichero), uye Cabernet Sauvignon (inopa chimiro uye kusanzwisisika).
Ose mazambiringa ewaCaro waini anotorwa nemaoko uye ruoko akarongedzwa pamberi pe-kudzika uye kupwanya kubvisa mukana wemazambiringa akashatiswa uye tannic stems yekupinda musanganiswa, ichigadzira nharaunda yakakwana yewaini isina kujeka uye isina kusimba.
• Bodegas Caro Aruma (husiku: mutauro wechiIndia Mendoza mutauro) 2019. 100 muzana Malbec anobva kuValle de Uco (Altamira, El Peral neSan Jose). Unoaked.
Zita rakasarudzwa sechiratidzo cherima rakasviba uye rakachena mhepo yemakomo ehusiku hweAndes. Inoviriswa mumatangi esimbi isina tsvina uye vakura mumatangi esimende anochengeta waini iri patembiricha yenguva dzose. Muchero weMalbec wakasvika muArgentina Ndatenda kuna French agronomist uyo akaona mukana wekuti mazambiringa abudirire kukura muMendoza yakakwirira-nharaunda nharaunda (1868).
Ziso rinocherera mutsvuku mutsvuku raspberries apo mhino inowana mablackberries, nhema nhema, plums, tsvuku michero, hint yezvinonhuwira (zvinova zvakanaka), uye violets. Palate inofadza, waini iyi inounza cranberries, blueberries, uye mamwe matanini. Chimbofunga icho chechokwadi Malbec kuravira chiitiko. Vhura maawa mashoma sips isati yatanga sezvo ichivhura uye nerupo inopa inonaka muromo chiitiko. Pair nebhuruu cheeseburger kana barbeque huku.
• Bodegas Caro Amancaya (Andes gomo ruva) 2018. 70 muzana Malbec, 30 muzana Cabernet Sauvignon. Mazambiringa anokohwa kubva paminda yakasarudzika yemizambiringa yakare muLujan de Cuyo, uye Altamira. MuLujan mazambiringa anorimwa mune zvese zvidimbu zve loam, dombo uye mavhu; muAltamira, minda yemizambiringa inowanikwa 100m pamusoro pegungwa pamubhedha wekare weRwizi rweTunuyan. Inoiswa kuti ikure mumabharaki emuouki (20 muzana nyowani) kwemwedzi gumi nembiri ichigadzira matani akanaka kwazvo. Miti yacho inogadzirwa naLafite Rothschild muFrance. Yekutanga mazambiringa ewaini iyi yaive 12. Iyi waini inofungidzirwa kuva ne "kuzivikanwa kweArgentina uye chimiro cheBordeaux" (Lafite.com).
Kukwezva kweziso kunoita kuti iyi iende-kuwaini kana ruby ​​tsvuku iri rako sarudzo. Sekunakidza mumhino waini inopa cocoa, maonde, michero mitsvuku nesinamoni uye pakupedzisira pamuromo muchero mutema nemuouki mune rekutsigira basa. Vhura maawa (kana mazuva) usati wanwa - paunowedzera mweya waunogamuchira, zvirinani kuendesa pane kuravira uye kuomarara. Pair neBarbeque, mbabvu, soseji kana chops chegwayana
• Bodegas Caro 2017. 74 muzana Malbec, 26 muzana Cabernet Sauvignon. Vakwegura hushoma hwemakore 1.5 mumabhiramu, makumi masere muzana muzana.
Mira! Iwe unofanirwa kunakirwa nerakanaka rima violet ruvara rweiyi waini. Wadaro, rega mhino yako iite basa rayo… kutsvaga musanganiswa wehwema hunoratidza raspberries, nhema mhiripiri, violets, clove uye yakapfuma yakasviba chokoreti. Iwo manyoro tanini anonanzva mukanwa uye anosanganisa zvinonaka neinozorodza acidity. Yako yakabikwa steak inotenda iwe nekuda kweshamwari yayo nyowani.
Waini iyi ine shoma yekugadzira uye haina kugadzirwa gore rega. Iyo ishoma nekuti inouya kubva kune yakatarwa chikamu chevhu. Makomo nemvura inonaya muMendoza saka kana kwanaya - inorema zvikuru, uye ivhu harina kugadzirira kupinza mvura yese inogadzira nzizi dzinodonhera kuAndes. Nzizi pamusoro pemazana emakore apfuura dzakagadzira mafeni ese anopinda murwizi, uye mafeni ane ivhu rakasiyana rinoita kuti ruzivo rwevhu rukoshe. Mazambiringa eCaro anokura muminda yemizambiringa munzvimbo dzakasarudzika dzakagadzirwa nevhu repasi. Aya mazambiringa anokura muvhu rine calcareous, rinova chalky, calcium rich limestone. Iwaini yakakwegura mumabhari isati yaiswa.